Caafimaadka Vantaa - InfoFinland
Magaalooyin > Vantaa > Nolosha Vantaa > Caafimaadka Vantaa
Adeegyada caafimaad ee Vantaa
Tallaalka Koronaha ee Vantaa
Tallaalka Koronaha waxaa Vantaa lagu siinayaa dhammaan dadka ka weyn 12 sano. Waa in ballaan loo qabsadaa tallaalka. Wakhtiga tallaalka koowaad iyo kan labaad waxaad ka qabsan kartaa cinwaanka koronarokotusaika.fi ama adigoo wacaya lambarka 09 5844 3030 (Isniin–Jimco, saacadda u dhexeysa 8 – 16).
Macluumaad dheeraad ah oo la xiriira arrimaha tallaalka iyo Koronaha waxaa lagu uruuriyay bogga: Xaaladaha dhibku jiro iyo Vantaa.
Lambarka guud ee xaaladaha degdegga ah waa 112. Wac lambarka xaaladaha degdegga ah, haddii ay jirto xaalad degdeg ah oo kaliya, tusaale ahaan jirro degdeg ah.
Haddii aad guriga degmo ku leedahay Vantaa, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka dadweynaha. Adeegyada caafimaadka dadweynuhu waa tusaale ahaan rugaha caafimaadka, goobaha daryeelka ilkaha, rugaha latalinta iyo isbitaalada. Haddii aad degdeg u jirato ama uu shil kugu dhaco, daryeel degdeg ah ayaad heleysaa, haddii aadan xittaa guri degmo ku laheyn Vantaa.
Haddii aadan xaq u laheyn in aad isticmaasho adeegyada caafimaadka dadweynaha, waxaad ballan ka qabsan kartaa xarumaha dhakhaatiirka gaarka ah.
War dheeraad ah ka sii akhri: Adeega caafimaadka ee Finland.
Adeegyada caadimaadka ee babliga ah
Vantaa waxay leedahay todobo rug caafimaad, kuwaas oo bixiya adeeyo caafimaad oo guud oo caafimaad. Rugaha caafimaadka waxaa qaabilaad ku sameeya dhakhtar, kalkaaye caafaimaad iyo fayadhawre caafimaad.
Rugaha caafimaadku maalmaha shaqada waxay furan yihiin saacadaha u dhexeeya 8.00–16.00.
Haddii xanuunka ku hayaahi uu degdeg yahay ama aad u baahantahay daryeel degdeg ah, waxaad wici kartaa lambarka rugtaada caafimaadka. Marka ay jiraan xaalado degdeg ah, waxaa suuragal ah in la dhigto codsiga ku soo celinta telefoonka saacadda u dhexeysa 8-10.
Rugaha caafimaadka Hakunila iyo Länsimäki 09 839 35928
Rugaha caafimaadka Korso ja Koivukylä 09 839 35923
Rugta caafimaadka Martinlaakso 09 839 35924
Rugta caafimaadka Myyrmäki 09 839 35925
Rugta caafimaadka Tikkurila 09 839 35926
Talabixinta caafimaadka ee wakhtiga ka baxsan xilliga shaqada: Heeganka caawimaadda 116 117.
Rugaha caafimaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Adeegyada caafimaadka ee sida gaarka ah loo leeyahay
Vantaa waxaa ka hawlgalaa rugo dhakhaatiir oo dhawr ah, kuwaas oo aad ka heli kartid adeeyo caafimaad oo gooni loo leeyahay. Waad aadi kartaa rugaha dhakhaatiirta, xitaa haddii aadan xaq u lahayn isticmaalka adeegyada guud ee caafimaadka ee Finland.
Kharashka rugaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay waa inaad idigu iska bixiso. Xaaladaha qaarkood Kela xoogaa magdhaw ah ayeey ka bixisa kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka.
Macaluumaadka la xiriira iibsiga daawooyinka waxaad ka heleysaa bogga internetka ee InfoFinland Daawooyinka.
Macluumaadka lagala xiriiri karo farmashiyeyaashaFinnish
Daryeelka caafimaadka ee dadka aan sharciga lahayn
Waxaa Helsinki ka hawlgala Global Clinic, halkaas oo dadka sharci la’aanta ku jooga Finland ay ka heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah. Adeegyada Global Clinic waa u bilaash macaamiisha. Global Clinic macaamiisheeda ma ogeysiiso booliska ama hawlwadeenada kale ee dawlada. Si loo xafido macaamiisha klinikada meesha ay ku taalo iyo waqtiyada ay furan tahay si guud looma ogeysiiyo.
Telefoonka Global Clinic ee Helsinki waa 044 977 4547. Telefoonka waxaa ka jawaabaya kalkaaliye caafimaad ama dhakhtar. Emailku waa global.clinic.finland(at)gmail.com.
Galbihii, dhammaadka usbuuca iyo maalmaha fasaxa, rugaha caafimaadku waa xiran yihiin. Haddii aad degdeg u jirato ama u dhaawacanto islamarkaasna aadan sugi kari furitaanka rugta caafimaadka, la xiriir heeganka.
Heeganka Vantaa waa isbitaalka Peijas. Cinwaan:
Haddii aad si kadis ah u xanuunsato, waxaad sidoo kale aadi kartaa baraha heeganka ee magaalooyinka kale. Wixii macluumaad dheeri ah oo la xiriira baraha heeganka waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee adeegyada caafimaadka Vantaa.
Goobaha heegankaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Ilmaha da’da iskuulka ka hooseeya daryeelka caafimaadka waxaa ka caawiya rugaha hooyada iyo dhallaanka (neuvola). Lambarka telefoonka ee rugaha latalinta Vantaa waa 09 8392 5900. Ballan ayaad ka qabsan kartaa rugta latalinta ama waxaad talo ka weydiin kartaa arrimaha la xiriira caafimaadka cunugga.
Ilmaha da’da iskuulka gaarey caafimaadkooda waxaa ka taxadaraya daryeelka caafimaadka ee iskuulka. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Vantaa.
Haddii uu cunuggu degdeg u jirao, la xiriir rugta caafimaadka. Rugaha caafimaadku waxay furanyihiin isniin-jimco saacadda 8-16.
Haddii ay rugta caafimaadku xirantahay, la xiriir heeganka Isbitaalka carruurta. Heeganka waxaa lagu daaweeyaa carruurta u baahan daryeel degdeg ah oo kaliya.
Lambarka telefoonka ee heeganku waa 116 117.
Waxaa sidoo kale cunugga geyn kartaa xarunta dhakhaatiirka gaarka ah. Vantaa waxaa ku yaal xarumo dhakhtareedyo badan oo gaar ah, kuwaas oo carruurta daaweeya.
War dheeraad ah ka sii akhri: Caafimaadka ilmaha.
Waqti qabsasho iyo la talinFinnish | Iswidish | Ingiriis
Daryeelka ilkaha ee guud
Daryeelka ilkaha (hammashoito) ee Vantaa, lambarka waqti qabsashadu waa (09) 8393 5300.
Haddii aadan u baahneyn caawimaad degdeg ah, wac 10ka subaxnimo kaddib. Haddii aad degdeg ugu baahantahay daryeelka dhakhtarka ilkaha, wac qabsashada wakhtiga islamarka la furo saacadda 7.30.
Qaabilaadda daryeelka degdegga ah waa rugta caafimaadka ee Tikkurila, Isniin- Jimco saacadda 8-14.
Daryeelka ilkahaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Galbihii iyo dhammaadka usbuuca heeganka daryeelka ilkuhu (hammashoidon päivystys) waa isbitaalka Haartman ee Helsinki. Horay u sii wac heeganka.
Lambarka telefoonku waa 09 471 71110. Qabsashada wakhtigu waxay furantahay maalmaha shaqada saacadda 14-21 iyo dhammaadka todobaadka saacadda 8-21.
Heeganka habeenimo ee daryeelka ilkuhu (hammashoidon yöpäivystys) waa isbitaalka Töölö qaybta shilalka. Horay u sii wac heeganka.
Hammashoidon yöpäivystys, saacadaha 21–8
Isbitaalka Töölö qaybta shilalka, Heeganka qaybta qalliinka afka iyo daamanka.
Heeganka daryeelka ilkaha ee habeenki iyo dhamaadka todobaadkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Daryeelka ilkaha carruurta
Macluumaadka la xiriira daryeelka ilkaha ee carruurta da’da iskuulka ka hooseysa waxaad ka heleysaa la talinta rugta hooyada iyo dhallaanka (lastenneuvola) iyo xarumaha daryeelka ilkaha (hammashoitola). Carruurta ka yar 17-sano waxaa loogu yeeraa baaritaanka daryeelka ilkaha qiyaastii labadii sanadoodba hal mar.
Macluumaad ku saabsan daryeelka ilkaha ee da'da iskuulkaFinnish
Daryeelka ilkaha ee gaarka loo leeyahay
Sidoo kale Vantaa waxaa ka hawlgala rugo dhakhaatiirta ilkaha ee gaar loo leeyahay. Waad aadi kartaa rugaha dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay, xitaa haddii aadan xaq u lahayn isticmaaka adeegyada guud ee daryeelka caafimaadka.
Kharashka rugaha dhakhaatiirta ilkaha ee gaarka loo leeyahay waa inaad adigu iska bixiso. Xaaladaha qaarkood Kela xoogaa magdhaw ah ayeey ka bixisa kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Daryeelka ilkaha.
Haddii aad u baaahan tahay cawinaad iyo garab istaagid xagga dhimirka ah, la xiriir rugtaada caafimaadka (terveysasema). Rugta caafimaadka waxaa lagu daryeelaa dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka oo iska caadiga ah. Rugta caafimaadku waxay kuu sameynaysaa hagitaan ay horay kuugu sii gudbineyso tusaale ahaan daryeeleyaasha murugada.
Haddii rugtaada caafimaadku aysan furneyn oo ay xaaladuna deg deg tahay, la xiriir isbitaalka guud ee Peijas heegankiisa (Peijaksen sairaalan yhteispäivystys).
Haddii aad si dhaqso ah u baahantahay cawinaad mushkiladeed, waxaad sidoo kale wici kartaa sooshalka –iyo heeganka mushkiladaha. Wuxuu furan yahay afar iyo labaatanka saac.
Sooshalka –iyo heeganka mushkiladaha
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka dhimirka
Macluumaad ku saabsan adeegyada caafimaadka dhimirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad u baahantahay kahortagga uurka, iska soo ridista uurma ama aad ka shakiso in aad qabto cudur galmada ah, waxaad la xiriiri kartaa rugta latalinta ee kahortagga uurka iyo qorsheynta qoyska. Telefoonka ayaad ballan ku qasan kartaa. Lambarku waa 09 839 50030.
Haddii aad qabto cudur galmada ah, waxaad sii kale aad kartaa bolikiliinikada cudurada galmada ee Helsinki ama rugta caafimaadka.
Vantaa waxay kahortagga uurka oo lacag la’aan ah siisaa dadka kayar 20 sano. Dadka kayar 24 sano xittaa waa heli karaan kahortagga uurka, haddii ay isticmaalayaan qalabka uurka looga hortago oo wakhti dheer ahm sida gariiradda ama kaabsalka kahortagga uurka.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka galmada iyo ka hortagga uurka.
Rugaha la-talinta qorsheynta qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Rugta hooyada iyo dhallaanka (äitiysneuvola) ayaa laga soconayaa caafimaadka hooyada, cunuga iyo kan qoyska oo idil inta ilmuhu uu uurka ku jiro oo dhan. La xiriir rugta hooyada iyo dhallaanka, haddii aad dareento inaad uur leedahay.
Telefoonada adeega ee xarumaha hooyada iyo dhallaanka.
Adeega teleefanaha rugaha hooyada iyo dhallaanka waxaad waqti uga qabsan kartaa rugta hooyada iyo dhallaanka waxaadna kalkaalisada caafimaadka telefoon ku weydiin kartaa arimaha la xiriira uurka ama dhalmada.
Waxaad isbitaal dhalmo u dooran kartaa mid ka mid ah isbitaalada xanydaabka darleelka bukaanka ee Helsinki iyo uudenmaa (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS), kuwaas oo tusaale ahaan ah isbitaalka Jorvi (Jorvin sairaala) iyo Klinikada dumarka (Naistenklinikka).
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Uurka iyo dhalmada iyo Finland markii uu ilmuhu dhaso.
Adeegyada cuuryaamiinta waad heli kartaa haddii adiga ama ehelkaadu uu qabo naafo ama jiro, taas oo sababeysa wakhti dheer in ay si gaar ah u adkaato ka soo bixista nolosha guriga iyo guriga banaankiisaba.
Adeegyada cuuryaamiintu tusaale ahaan waa caawimaad shakhsi ah, deegaan adeeg leh, adeegga gaadiidka iyo shaqada wax ka beddelista dhismaha.
La xiriir rugta latalinta cuuryaamiinta, halkaas oo iyadoo xaaladdaada lagu saleynayo lagu baarayo baahida kaalmada, hagitaanka iyo adeegyada.
Isniin- Jimco saacadda 9-15
Ka sii aqri warar dheeraad ah: Dadka naafada ah.
Macluumaad ku saabsan adeegyada naafadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 27.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir